Gootnifi Qabsaa’an Oromoo Jaal Urgeessaa Daammanaa Mana Hidhaa wayyaanee Qilinxoo hidhaa Waggaa 4 itti murtaa’ee ol hidhamuun har’a gadhiifame!! | Kichuu
Posted on May 22, 2018 by kichuu_admin
Dargaggoo Qaroon Oromoo Jaal Urgeessaa Daammanaa Umurii Daa’imummaa isaa irraa eegaluun manneen hidhaa wayyaanee kachallee Amboo, Maa’ikalaawwii, Qaallittii, Shawaa Roobitifi Qilinxootti yeroo garaagaraatti hidhamee hiraarfama kan ture goota ilma sabaati!!
Bara 2014 Mormii Master Plan Finfinneefi Sochii warraaqsaa FDG_FXG kanneen qindeessaan keessa jirta jedhamuun humnoota Waraanaafi tikaa wayyaaneetiin Yuunibarsiitii Rifti Vallii utuu baratuu ukkanfamee manneen hidhaa wayyaanee Maa’ikalaawwii, Qilinxoofi Shawaa Roobititti hidhamuun hiraarfama ture. Yeroo manni hidhaa Qilinxoo gubatee kanneen achii keessatti hiraarfamaa turan keessa nama tokko ture. Sana booda Shawaa Roobitti geeffamuun hiraarfamaa turee boodarra Qilinxootti deebisanii murtii haqaa waakkatamee hiraarfamaa erga turee yakka balleessuummaa tokko malee murtii hidhaa waaggaa 4 manni murtii wayyaanee Lidataa jiru itti murteessuu gabaasa turuun keenya ni yaadatama!!
Qeerroo dargaggoo qaroon Oromoo Jaal Urgeessaa Daammanaa murtii hidhaa itti murtaa’een ol hidhamuun guyyaa har’aa hidhaa irraa hiikkamee Uumnata Oromoofi maatii isaatti dabalamaa jira. Turtii manneen hidhaa garaagaraa kana keessatti hiraarsaa ulfaataa isarra gahaa tureen dhukkubsachaa akka jiruufi qaroon agartuu ija isaa fagootti arguu dhabuun dhukkubsataa kan jiru ta’uun beekamadha; Uummatni Oromoo goota ilma sabaa kanaaf durmannaafi simannaa addaa gochuun akka yaalsiftan dhaamsa Oromummaa dabarsina!!
Kana malees guyyaa har’aa Sabboontootni ilmaan Oromoo lama :
1. Dhiinsaa Fufaafi
2. Tolasaa Bachaadhaa kanneen jedhamaan mana hidhaa Qaallittii irraa hiikkamaniiru.
Baga waaqni isiin baasee maatiifi uummata Oromootti isin dabale!!
Mana hidhaa: Aangaa’oonni Ol’aanoo Naannoo Oromiyaa Walgahii Dhimma Biyyaa